Iibso Naqshad Qurux Badan dhoola cadeyn Musqusha Musqusha - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Beautiful Design Smiley Feet Musqusha Fool-qabasho
$ 5.44 qiimaha joogtada ah $ 7.76
Beautiful Design Smiley Feet Musqusha Fool-qabasho gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Qaabka:Qoryaha loo yaqaan 'Wall Sticker'
Number Model:Musqulaha Toilet Stickers dhoola cadeynta
Description: Waxyaabaha: PVC Xajmiga Xajmiga: Ku saabsan 24x18cm Features: Si fudud Peel iyo Stick on Ma libdhi doonaan ama ma ordi doonaan marka ay qoyaan. Qurxinta darbiga farshaxanka ah ee gurigaaga. Qalabkan loo yaqaan 'Wall Art Decal' ayaa ku habboon inuu qosol ku daro musqushaada ama musqushaada! Waxay ku dhegan yihiin inta badan dusha sare ee siman. Waxaa loo isticmaali karaa oo keliya musqusha, laakiin dhammaan hareeraha guriga iyo xitaa gaarigaaga! Sida loo codsado: Tallaabada 1: Filimka wareejinta diirka, waxaad arki doontaa istiikarka filimka ku yaal. Tallaabada 2: Ku dhaji cajaladda wareejinta shayga la jecel yahay (Musqushaada iwm.) Tallaabada 3: Ku duub kaar leh cadaadis, ka dibna si tartiib ah uga qaad xaashida dalabka. Fadlan ogow: 1.Markaad codsanaysid istiikarka fadlan hubi in dusha sare uu nadiif yahay oo qalalan yahay. Cabbirka dhabta ah ee shaygu wuu ka duwan yahay waxa sawirka ka muuqdo, Fadlan si naxariis leh u hubi sharaxaadda oo faahfaahsan. Xidhmada ka mid ahaa: Xarkaha loo yaqaan '1x Wall Sticker'